‘Abominable’ filma navoakan’ny DreamWorks voarara any Vietnam, Malayzia, ary ny Filipina noho ny famoahana ilay fari-dranomasina ifandirana lazain’i Shina ho azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2019 10:30 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Português, नेपाली, русский, 日本語, Español, English
Loharanontsary: pejy Facebook ‘Abominable’
Noraràna tao Vietnam, Malayzia, ary Filipina ny sarimiaina hita ao amin'ny DreamWorks mitondra ny lohateny hoe ‘Abominable’ noho ny famoahana an-tsary tao anatin'ny filma ny politikan'ny ‘nine-dash line’ (tsipika sahafa sivy) fanaon'i Shina.
‘Abominable’ dia milaza ny tantaran'ny tanora shinoa iray izay nahatsikaritra Yeti (vazimban'orampanala miaina any Himalayas fandre amin'ny angano) tao amin'ny tranom-pianakaviany ka nangataka ny fanampian'ny namany hampody ilay zavamananaina any an-tendrombohitra Everest. Niara-nanatontosa ilay filma ny Pearl Studio miorina ao Shanghai sy ny DreamWorks orinasa mpamoaka sarimiaina miorina ao Hollywood.
Asongadin'ny politikan'ny ‘tsipika sahafa sivy’ avoakan'i Shina ny fitakiany fa azy ireo nosy maro ao amin'ny Ranomasina Shina Atsimo izay toherin'ny firenena maro ao Azia Atsimo Atsinanana. Nipoaka tao Vietnam sy Filipina ny hetsi-panoherana tamin'ny fotoana nilazan'i Shina samirery fa azy ireo fari-dranomasina ifandirana. Ampangain'ny governemanta amin'ireo firenena ireo roa ireo ihany koa i Shina ho manitsakitsaka ny fari-dranomasiny.
Ny ‘Abominable’ io dia nampiroboroboana ho ‘Everest: The Little Yeti’ (Everest: ilay Yeti kely) tao Vietnam ary nojerena tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra talohan'ny niparitahany nivoaka ny teathra taorian'ny nahitana izay niteraka setriny avy amin'ny mpijery tao amin'ny sehatra iray mampiady hevitra tao amin'ny filma.
Namoaka sarintany manohana tanteraka ny maha an'ny shinoa ireo faritra ifandirana ao amin'ny ranomasina shina atsimo ny sarimihetsika vaovao Abominable navoakan'ny DreamWorks
Notsikerain'ny sekretera misahana ny raharaham-bahiny ao Filipina Teodoro Locsin Jr. ihany koa ny fahadisoana amin'ny famariparitana ny sarintanin'ny firenena.
Nanolo-kevitra izy ny hanasivanana ilay sehatra, hampiditra fakan-kevitry ny governemanta ny amin'ilay fanapahana, ary hiantso ny hanaovana ankivy ny DreamWorks fa tsy handrara ilay filma.
Siora fa mihevitra aho fa azo heverina ho karazam-panoavana eo amin'ny sehatra diplaomatika ny tsy manao setriny. Fa tsy maintsy ho tsy mandrahona indrindra amin'ny fahalalaham-pitenenana izany: tapahina ilay sehatra manafintohina ary atao mangorovitsika ny endrik'ilay mpiasam-panjakana manazava ny anton'izany.
Mazava loatra fa tokony hotapahin-dry zareo ilay sehatra manafintohiina izay maneho ny tsi-fankasitrahantsika no tsara kokoa mihoatra noho ny fandraràna tsy araka ny lalampanorenana araka izay tolokevitry ny sasany. Aleo tapahana maina. Angamba asiana lohan'ny mpikambana iray ao amin'ny MTRCB manao vakinteny fanambaràna. Dia mitohy ny sarimiaina avy eo.
Taty aoriana ny Biraon'ny mpanamarina sy mpanasokajy sarimihetsika sy jeritodiky ny televiziona (MTRCB) ao amin'ny governemanta nanapa-kevitra ny hanaisotra ilay filma tsy handeha amin'ny teathra.
Nanome baiko ny DreamWorks ny biraon'ny fanaovana sivana ao Malayzia hanapaka ilay sehatra saingy nitsipaka io ka nitondra ho any amin'ny fanapahan-kevitra tsy hampiseho ilay sarimihetsika ao amin'ny firenena, izay nokinasa hivoaka amin'ny 7 Novambra.
Maro ireo mpiserasera ao amin'ireo firenena telo ireo no manohana ny fanapahan-kevitra na hanivana ilay filma na hanakana ny famohana azy amin'ny efijery.
Saingy misy sasany manoratra ihany koa fa tsaratsara kokoa ny mampirotsaka antsehatra ny mpijery sarimihetsika sy artista any Shina ary mampahafantatra azy ireo ny antony tokony handinihana indray ny politikan'ny ‘tsipika sahafa sivy’. Fandresen-dahatra mitovy amin'izany ihany koa ny an'i Tyrone Velez mpanao matoandahatsoratra ao amin'ny gazety Filipino iray, raha nanoratra tao amin'ny Facebook:
Voarara noho ny sarintany izay tsy ao anatin'ny fahadisoan-dry zareo akory i Abominable.
Ahoana mora raha nampianarin'ny governemanta azy ireo ny sarintanin'ny tsipika sahafa sivy?
Mila mifampiresaka amin-dry zareo isika ary olona maraintsaina ireo… Mba diso lalana fotsiny ry zareo.